DOWNLOAD ICARO BK117 Final Edition ngwugwu FS2004 - Rikoooo
downloads 11 116
ICARO Aircraft Development ji nganga awade ICARO BK117 Final Edition 2009.
Mgbe abụọ na ọkara afọ nke na-emepe emepe na artworking ndị BK117, ebe a bụ a freeware ngwaahịa niile BK Fans.
Ọ bụ mbụ freeware BK117 na zuru animated VC na ụfọdụ phototextures, na-, ụda na ọkụ na nke a nlereanya e ju. E nwere ụfọdụ ụdị dị ka winch, njem, auxtank na radarnose a ngwugwu. Biko gụọ ụgbọ elu ntuziaka nke ọma. Na-eche free na-agba ịnyịnya na a helikopta. Nke a ngwugwu na-agụnye isii repaints gụnyere Medicopter.
The BK117 bụ a vasatail ejima-engine helikopta. Ọ bụ n'ihi a nkwonkwo development n'etiti 1979 Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) na Kawasaki Arọ Industries (KHI).